Budata SUPERAntiSpyware Free Edition maka Windows
Budata SUPERAntiSpyware Free Edition
Free Budata maka Windows (22.95 MB)
Budata SUPERAntiSpyware Free Edition,
SUPERAntiSpyware bụ mmemme spyware ọgbọ ọhụrụ ma ọ bụ mmemme iwepụ adware nwere teknụzụ nyocha ọtụtụ ihe na teknụzụ ajụjụ ajụjụ. Na -echebe sistemụ gị site na ịchọta na iwepu 1,000,000+ spyware.
Ihe mmemme a nwere atụmatụ nchedo yana atụmatụ mweghachi. Ọ na -arụzi njikọ ịntanetị gị kwụsịrị, na -egbochi mmebi nke malware mebie desktọọpụ gị, na -ahazi ndekọ sistemụ, ma na -arụ ọrụ dị ka njikwa ọrụ ịchọta na ibibi spyware nke nwere ike bute nkebi ndị a. Ọ na -eme nyocha zuru oke ma ọ bụ ahaziri iche nke diski ike gị, na -enyocha draịva mpụga, ndekọ ebe nchekwa, faịlụ nkeonwe iji chekwaa ha.
Site na mmemme a na -akwụghị ụgwọ nke nwere ike inyocha spyware, adware, malware, trojans, dialers, ikpuru, keyloggers na ndị na -apụnara mmadụ ihe, kọmputa gị agaghị abụ onye arụrụ arụ arụrụ arụ. Ọ na -achọpụta ngwa ngwa ụdị sọftụwia ọjọọ a nke na -anwa ịbanye nime sistemụ gị wee gbochie usoro nrụnye na nrụnye.
Site na njirimara nnweta diski Direct, mmemme a nwere ike ịhụ rootkits nke mmemme ndị ọzọ enweghị ike ịhụ, ị ​​gakwaghị atụ egwu maka ngwanrọ ọjọọ ọ bụla.
Agụnyere mmemme a na ndepụta mmemme Windows kachasị mma.
SUPERAntiSpyware Free Edition Ụdịdị
Nha faịlụ: 22.95 MB